Otu esi eji ngwa a tinye nkwuwa okwu na Instagram ngwa ngwa | Androidsis
Etu esi etinye obi ike na Instagram na aghụghọ ndị ọzọ dị mkpa
Netwọk mmekọrịta na -ewu ewu na -ese foto abụrụla otu n'ime nnukwu ihe egwu Facebook. Na ihe bụ, Instagram na -enye ụdị ọrụ niile iji nweta ihe kachasị na netwọkụ mmekọrịta a zuru oke. Ma ọ bụrụ na ị maara n'elu ngwa kachasị mma iji kpochapụ ohere gị, ị nwere ike ịnụ ụtọ karịa mgbe ọ bụla Instagram.
Maka nke a anyị kwadebere nkuzi zuru oke ka ị nwee ike metụ mkparịta ụka gị na netwọkụ mmekọrịta a aka. Kedu? Mgbe ahụ na -agbakwunye obi ike na Instagram.
1 Instagram anaghị anabata ya nwa afọ
2 Enwere ngwaọrụ ịntanetị ka ị nwee ike iji obi ike na Instagram
3 Nke a bụ ngwa kachasị mma iji tinye obi ike na Instagram
Instagram anaghị anabata ya nwa afọ
Ma na WhatsApp ma na Telegram anyị nwere ohere ịgbanwe ụdị font nke leta ahụ, ihe enweghị ike ime na Instagram. N'ala nna Instagram anaghị enye gị ohere ịme akwụkwọ ozi ahụ n'atụghị egwu, italics ma ọ bụ ihe ngosi, mana site na ngwa ndị ọzọ ma ọ bụrụ na ị ga-enwe ike ime ya
para gbanwee usoro font na Instagram Mbụ ị ga -etinyerịrị ngwa ahụ yana njikọ ịntanetị dị mma. Echegbula onwe gị maka na mgbanwe mgbanwe mkpụrụedemede a ga -adị mma na gam akporo na iOS, yabụ ndị na -eso ụzọ gị ga -enwe ike ịhụ ya nke ọma. Buru n'uche na ị ga -enwe ike itinye ụdị mkpụrụedemede a na akụkọ ndụ yana yana ederede ị tinyere na nkọwa.
Nke bụ eziokwu bụ na akụkụ ụfọdụ anyị anaghị aghọta ihe kpatara ngwa dị ka Instagram anaghị enye ọrụ a nke ọma. Ekwesịrị icheta na netwọkụ mmekọrịta a na -ewu ewu foto, nke bụ otu n'ime ihe ịga nke ọma na ikike TikTok, nwere ọtụtụ narị nde ndị ọrụ na -abanye ngwa ndị a kwa ụbọchị.
Agaghị ekwu maka ọnụ ọgụgụ buru ibu nke "ndị na -eme ihe nkiri instagram" ndị na -ebi ndụ site na mbipụta ndị kacha dị iche iche na maka ebumnuche mgbasa ozi. Na, eziokwu bụ na Ọ bụghị ihe anabatara na ngwa a na -eji ebe niile enweghị nke a na nhọrọ ndị ọzọ. Ee, ọ bụ eziokwu na, dịka ị ga -ahụ ma emechaa, enwere ngwaọrụ dị iche iche ị nwere ike iji tinye nkwuwa okwu na Instagram, yana mkpụrụedemede ndị ọzọ ga -enye mmetụ onwe gị na nke dị iche na mbipụta gị na netwọkụ mmekọrịta ama ama foto nwere. Facebook.
Mana eziokwu ahụ bụ na ụlọ ọrụ Mark Zuckerberg tọrọ ntọala agbanyeghị iji tinye atụmatụ a nke ọma na ngwa nke ọtụtụ iri nde mmadụ na -eji kwa ụbọchị, enweghị isi. Agbanyeghị na ekele maka "pasotismo" a, nke bụ eziokwu bụ na enwere ndị mmepe ngwa na -ewere baton iji dozie obere adịghị ike ndị a na Instagram na netwọkụ mmekọrịta ndị ọzọ. Yabụ, anyị nwere ike ịsị na ọ dịghị ihe ọjọọ na -abịa maka ezi ihe, nri? Na -enweghị mgbagha ọzọ, anyị na -ahapụrụ gị ụzọ abụọ anyị chere kacha mma ka anyị nwee ike gbanwee font nke leta instagram ma dee ozi na -eju anya maka ndị na -eso ụzọ gị ka ha na -ebi akwụkwọ akụkọ gị.
Enwere ngwaọrụ ịntanetị ka ị nwee ike iji obi ike na Instagram
Nke mbụ, otu ụzọ isi nweta nsonaazụ bụ site na iji onye ntụgharị okwu «Mkpụrụ edemede Maka Instagram»Site na LingoJam. Iji ya dị mfe ebe ọ bụ na ị ga -abanye web wee dee ederede ịchọrọ. Mgbe ịdechara ya, ederede ị dere ga -apụta n'okpuru, yana mkpụrụedemede na atụmatụ dị iche iche. Ị nwekwara nhọrọ nke Cool Symbol.
E nwere ụdị akwụkwọ ozi niile, ụfọdụ ndị dị egwu mana na -agbada n'etiti ndepụta ahụ, ị ​​ga -ahụ ederede ahụ n'atụghị egwu, akwụkwọ edemede na ngwakọta n'etiti ha abụọ. Ọ bụrụ na ịgbaso ndepụta a gbadara agbada, ị ga -ahụ nkwụsị ọrụ dị iche iche ka ịhọrọ nke masịrị gị. Ozugbo ị matara nke ị ga -etinye, họrọ ederede ịchọrọ idetuo, mepee Instagram wee tinye ya ebe ịchọrọ, ọ bụrụ akụkọ ndụ ma ọ bụ nkọwa.
Site n'ihe ị na -ahụ Usoro dị nnọọ mfe. Na iji zere inwe icheta weebụ oge ọ bụla ịchọrọ iji ya, ọ kacha mma ịme nnweta ozugbo na enyo gị iji nweta ya ngwa ngwa. Iji mee nke a, naanị pịa bọtịnụ ntọala nke ihe nchọgharị gị wee họrọ "Tinye na ihuenyo mbụ".
Dị ka ị hụla, nke a bụ ụzọ dị mma iji tinye obi ike na Instagram iji metụ aka na mkparịta ụka gị. Na mgbakwunye, enwere nhọrọ dịgasị iche iche ka ị nwee ike iji ụdị mkpụrụedemede dị iche iche nke ga -eju ndị enyi na ndị ị hụrụ n'anya anya.
Na, na -eburu n'uche na webụsaịtị a enweghị mgbasa ozi yana na enwere ike iji ya n'efu, ọ bara ezigbo uru ịchekwa ya na ọkacha mmasị ka ị nwee ike iji ya oge ọ bụla ịchọrọ ịnye mmetụ dị iche na ozi gị na netwọkụ mmekọrịta a ma ama nke Mark Zuckerberg nwere.
Eziokwu bụ na n'echiche anyị nke a bụ ụzọ kachasị mma iji gbanwee font nke leta na Instagram. Karịsịa n'ihi na weebụ na -enye nhọrọ zuru oke ka ị ghara ịchọta ngwọta ndị ọzọ. Agbanyeghị, n'aka nke ọzọ, enwere ngwa dị na Google Play nke ga -enyere gị aka ịgbanwe ụdị font na tinye nkwuwa okwu na Instagram n'ụzọ kachasị mfe.
Nke a bụ ngwa kachasị mma iji tinye obi ike na Instagram
Site na sistemụ arụmọrụ gam akporo enwere ezigbo ngwa akpọrọ Ederede Nke Stari nke nwere otu ọrụ, nweere onwe ya na ịgaghị emepe ihe nchọgharị ahụ. Naanị ihe ị ga -eme bụ ibudata ngwa ahụ, nye ikikere ma banye n'ime ederede ịchọrọ. Enwere ọnụọgụ nhọrọ dị ukwuu yabụ ị ga -enwe usoro ịhọrọ site na.
Ozugbo ịhọrọ nke masịrị gị, pịa ya, detuo ya (ị nwere ike ime ya site na ịpị na ijigide okwu ma ọ bụ bọtịnụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ), banye na Instagram wee tinye ederede ebe ịchọrọ, ma na akụkọ ndụ ya na n'okpuru foto. . Kwuo na ngwa a nwere ntakịrị mgbasa ozi. Mana ịtụle ohere ọ na -enye, na mgbakwunye na ọ bụghị ihe mkpasu iwe ma ọlị, ọ bara uru ịnwale.
Ederede nkecha - ahụigodo mkpisi, akwụkwọ mmado, aha otutu
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Etu esi etinye obi ike na Instagram na aghụghọ ndị ọzọ dị mkpa